Archive du 20180102
Marc Ravalomanana Ketrehana mafy ny hisamborana azy
Nanamafy omaly alatsinainy nandritra ny lanonana noho ny asaramanitry ny taom-baovao niarahany tamin’ireo fianakaviany, mpiara-miasa akaiky aminy, tapaka sy namana tsy mahafoy azy teny Faravohitra i Marc Ravalomanana fa kandida filoham-pirenena ary tsy hampihemotra azy mihitsy ny fandrahonana atao aminy.Ajoro ihany koa ny Komity manohana an’i Marc Ravalomanana (KMMR) ary vonona ny tenany hiara-kiasa amin’ny fikambanana na antoko politika manana vina mitovy aminy sy tena vonona amin’ny fanarenana ny firenena.
Hery Rajaonarimampianina Nohampangain’ny vava be nataony
« Porofoy amiko, fa mahantra ny Malagasy », hoy ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany aloha tany. Fanompana sy fanesoana tsotra izao no nandraisan’ny rehetra izany, kanefa tsy mba nahatsapa tena ho nanana fahadisoana tamin’iny teniny iny ny Filoha Malagasy, ka fady azy izany niala tsiny izany. Izay tokoa angamba ilay hoe ny lehibe tsy mba meloka, araka ny fomba fitenin’ny Malagasy. Raha mbola mila porofo hafa ny fanjakana Rajaonarimampianina dia 97,7% ny tahan’ny fahantrana eto Madagasikara amin’izao fotoana izao, hoy ny mpampianatra toekarena iray eny amin’ny anjerimanontolo.
Andry Rajoelina Manomboka ny pi-maso
Migadona ny taona 2018, ka dia nanao fanambarana mifandraika amin’izany i Andry Rajoelina, Filohan’ny tetezamita teo aloha omaly 01 janoary. Misaotra an’Andriamanitra isika nanome tonon’andro antsika ka nahatrarana izao taona vaovao 2018. Arahabaina samy tra-pamonjena sy nombam-pitahiana, ka indro tratra ity anio ity. Koa tolorako ny arahaba feno firaraiantsoa ny tokantrano rehetra tsy an-kanavaka samy tratra ny asaramanitra, hoy ny Filohan’ny tetezamita teo aloha nandritra ny firariantsoa nataony omaly noho ny fahatrarana ny taona 2018. Indro migadona ary ity taona vaovao ity 2018, handrandraina hitondra fanantenana, ary hantenaintsika ihany koa fa hitondra fahombiazana, hanehoantsika rehetra tsy ankanavaka ny firaisam-po ary indrindra ny firaisan-kiana, hoy izy.
Raharaha Marc Tatandraza Fanadalana saim-bahoaka fotsiny ?
Nanomboka ny takarivan’ny alahady 24 desambra no niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera fesiboky ny sarin’ilay mpitarika fivavahana amina fiangonana zandriny Marc Tatandraza, izay nambara fa maty. Tao ny nandray izany ho toz-javatra hatao fihomehezana sy fialam-boly, fa tao kosa no tezitra sy niteny ratsy azy mihitsy aza. Niteraka ady hevitra ity toe-javatra ity, ary maro no nanakiana azy ho mpanadala saim-bahoaka satria ny sary nivoaka, ohatra, dia nifanaingina sy nifamadibadika ny tanany, raha toa ka mahitsy sy tsy mifandray velively ho an’ny maty rehetra.